Magaca Kiimikada: Qaabdhismeedka Molecular Mawduuca Polyacrylic Acid Iskutallaabta: - [-CH2-CH-] N-COOH. Waxyaabaha Qoyaanka%: ≤2.0% Viscosity: 29400 ～ 39400 mPa.s Carboxylic acid Content%: 56.0—68.0% Metal culus (ppm): ≤20ppm Haraaga Solvents%: ≤60 ppm Sifooyinka: Waxay leedahay degenaansho joogto ah oo ku jirta dan sare , oo waxay ugu habboon tahay maamulka afka sababta oo ah qadar yar oo ah dareeraha haraaga ah. Range of Application: Af ahaan qaadashada, qeyb ahaan maamulka iyo nidaam gaarsiinta cusub, con ...
Badeecadani waa acrylic acid isku xidhan allyl sucrose ama pentaerythritol allyl ether polymer. Marka loo eego badeecada qalalan, waxa ku jira kooxda karboksilklic acid (- COOH) waa inay ahaadaan 56.0% - 68.0%. Magaca Kiimikada: Qaab dhismeedka Molecular Mawduuca Polyacrylic Acid Resin: - [-CH2-CH-] N-COOH Muuqaalka: Budada cad ee dabacsan PH Qiimaha: 2.5-3.5 Qoyaanka qoyaanka%: -2.0% Viscosity: 30000 ～ 40000 mPa.s Carboxylic Waxyaabaha aashitada ku jira%: 56.0—68.0% Bir culus (ppm): ≤20ppm Haraaga Daawooyinka%: -20ppm Astaamaha: Waa h ...
Carbopol, oo sidoo kale loo yaqaan carbomer, waa cusbi iskudhafan iskudhafan oo iskudhafan oo leh acrylic acid by pentaerythritol iyo wixii lamid ah. Waa jaangooye aad u muhiim ah. Dhex-dhexaadinta ka dib, Carbomer waa shaashad jel aad u fiican oo leh dhumuc, ganaax iyo adeegsiyo kale oo muhiim ah. Waxay leedahay hanaan fudud iyo xasillooni wanaagsan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa emulsion, kareem iyo jel. Magaca Kiimikada: Qaab dhismeedka Molecular Mawduuca Polyacrylic Acid Resin: - [-CH2-CH-] Muuqaalka N-COOH: budada cad ee dabacsan ...
Magaca Kiimikada: Qaab dhismeedka Molecular Mawduuca Polyacrylic Acid Resin: - [-CH2-CH-] N-COOH Muuqaalka: Budada cad ee dabacsan PH Qiimaha: 2.5-3.5 Qoyaanka Qoyaanka%: -2.0% Viscosity: 2000 ～ 11000 mPa.s Carboxylic Qiyaasta Acid%: 56.0—68.0% Birta culus ppm: ≤20ppm Haraaga Daawooyinka%: ≤60ppm Qiyaasta lagu taliyay ee Carbopol 971: 0.2-1.0% Electrolyte ay kujirto emulsion daryeelka maqaarka, kareem, jel hufan oo ay kujiraan aalkolo, jel daryeel maqaar hufan, timo qurxin jel, shaambo iyo jubbada qubeyska. Astaamaha ...
Carbopol 941: qulqulka dhaadheer, dareeraha hooseeya, caddayn sare, caabbinta dhexdhexaadka ah ee ion iyo caabbinta xiirida, oo ku habboon jel iyo emulsion. Magaca Kiimikada: Qaab dhismeedka Molecular Mawduuca Polyacrylic Acid Resin: - [-CH2-CH-] N-COOH Muuqaalka: budada cad ee dabacsan PH Qiimaha: 2.5-3.5 Qoyaanka Qoyaanka%: -2.0% Viscosity: 4000 ～ 11000 mPa.s Carboxylic Waxyaabaha Aashitada%: 56.0—68.0% Birta Culus (ppm): Res20ppm Haraaga Daawooyinka%: -0.2% Soosaarka Alaabta Sheyga waa polymer acrylic leh iskutallaabta polyenyl ether ...
Carbopol, oo sidoo kale loo yaqaan carbomer, waa cusbi iskudhafan iskudhafan oo iskudhafan oo leh acrylic acid by pentaerythritol iyo wixii lamid ah. Waa jaangooye aad u muhiim ah. Dhex-dhexaadinta ka dib, Carbomer waa shaashad jel aad u fiican oo leh dhumuc iyo ganaax. Waa wax fudud, deggan oo si ballaaran loogu isticmaalo emulsion, kareem iyo jel. Magaca Kiimikada: Qaab dhismeedka Molecular Mawduuca Polyacrylic Acid Resin: - [-CH2-CH-] N-COOH Muuqaalka: budada cad ee dabacsan PH Qiimaha: 2.5-3.5 Qoyaanka Qoyaanka%: -2.0% ...
Carbopol 934: cusbada iskudhafan ee polyacrylic acid, nidaamka gudbinta daroogada maxalliga ah, oo deggan xasaasiyad sare, oo loo isticmaalo jel, emulsion iyo ganaax. Magaca Kiimikada: Qaab dhismeedka Molecular Mawduuca Polyacrylic Acid Resin: - [-CH2-CH-] N-COOH Muuqaalka: Budada cad ee dabacsan PH Qiimaha: 2.5-3.5 Qoyaanka Qoyaanka%: -2.0% Viscosity: 30000 ～ 40000 mPa.s Carboxylic Waxyaabaha Aashitada%: 56.0—68.0% Birta Culus (ppm): Res20ppm Haraaga Daawooyinka%: -0.2% Astaamaha: Adkaynta dhumucdu way wanaagsan tahay, waxayna leedahay joogto ...
Carbomer 980 waa walxo carbomer caadi ahaan la isticmaalo. Carbomer waa polymer molecular sare oo ah acrylic acid allylic sucrose ama pentaerythritol allyl ether. Badanaa waa budada cad ee aashitada yar yar ee cad. Waxay soo saari kartaa isku-dhafnaan wax-ku-ool ah oo ka hooseysa qiyaasta hoose, taas oo soo saaraysa noocyo kala duwan oo nafsaani ah iyo sifooyinka rheological ee emulsion, kareem, jel iyo transdermal diyaarinta Waxyaabaha carbomer-ka kala duwan way ka yara duwan yihiin. Moodooyinka kala duwan waxay matalaan nafwaayo kala duwan, sidaa darteed waa ...